warkii.com » Sonu Sood oo buug ka qoraya wixii uu ka bartay tallaabadii ugu cajiibsaneyd ee uu qaaday intii lagu gudo jiray maalmihii bandowga COVID-19
Sonu Sood oo buug ka qoraya wixii uu ka bartay tallaabadii ugu cajiibsaneyd ee uu qaaday intii lagu gudo jiray maalmihii bandowga COVID-19
Jilaaga caanka ah ee Sonu Sood ayaa u qalin qaadanaya buug uu ka qori doono khibraddii iyo duruustii uu ka bartay caawinta shaqaalaha qaxootiga ah ee dalkaas ku sugan kuwaasoo uu ka caawiyay inay ku laabtaan halkii ay kasoo jeedeen intii lagu gudo jiray maalmihii coronavirus uu bandowga galiyay dalka India.
“Saddexdii bilood iyo barkii ugu dambeyay waxay ii ahayd maalmo ay nolosheyda is baddeshay, sidoo kalena aan khibrad ka kororsaday inaan maalintii muhaajiriinta la qaato 16 saacadood illaa 18 saacadood, xanuunkoodana aan la qaybsado” ayuu yiri jilaagan.
Sonu ayaa sheegay in qalbiga uu ka dareemayay farxad badan marka uu arko muhaajiriinta oo billaabaya inay dalalkooda ku laabtaan.
” Wixii ugu quruxda badnaa ee aan arko nolosheyda oo dhan waxay ahaayeen marka aan arko dhoolacaddeyntooda iyo ilmada kaga imaaneysa farxadda darteed, waxaanna balan qaadayaa inaan sii wadi doono dadaalka aan guryahooda ugu celinaayo illaa muhaajirka ugu dambeeya uu xaafaddiisa tago, una tago dadkii jeclaa” ayuu hadalkiisa ku daray Sonu.
Sonu Sood ayaa sidoo kale ha hadlay qoritaanka buugga uu kaga hadlaayo khibraddan cusub, waxaana uu sheegay inuu meel ku qori doono maalmihii uu howshan ku jiray.
Jilaagan ayaa sidoo kale tilmaamay inuu saaxiibbo badan oo cusub ku yeeshay gobollo iyo deegaannadii uu shaqadan u tagay sida UP, Bihar, Jharkhand, Assam, Uttarakhand iyo goobo kale oo fara badan.